Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSt. Eustatius Breaking » ISt. Eustatius yamkela abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSt. Eustatius Breaking • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Abahlali abangagonywanga, amalungu osapho, abasebenzi okanye abantu abanamakhaya eStatia kwaye bekwilizwe elinomngcipheko omkhulu okanye ilizwe elinomngcipheko omkhulu bamkelekile ngokunjalo kodwa kufuneka bangene bodwa ixesha leentsuku ezili-10 emva kokungena.
Abakhenkethi abangagonywanga abanakho ukundwendwela iStatia.
Ngenxa yefuthe elikhulu le-COVID-19 kuqoqosho lwaseStatia, uRhulumente wasekhaya akanakukhetha enye into ngaphandle kokuqhubeka nokuvula isiqithi.
Uluhlu lomngcipheko omkhulu kakhulu, umngcipheko omkhulu, umngcipheko omncinci kunye namazwe asezantsi kakhulu aya kuhlaziywa rhoqo.
IQumrhu likaRhulumente St Eustatius Ngokwenjenje ukukhumbuza uluntu ukuba ukusukela ngoMvulo ozayo, Agasti 2, 2021 isigaba sesithathu seNdlela yeNdlela siza kusebenza. Oku kuthetha ukuba iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo kubandakanya nabakhenkethi banokundwendwela iStatia.
Iindwendwe ezivela kumazwe anobungozi kakhulu kufuneka zihambisane nemigaqo engqongqo yeentsuku ezintlanu xa ifika equka ukunxiba imaski yobuso, ukugcina umgama ekuhlaleni nokungayi kwimisitho emikhulu. Abakhenkethi abagonyiweyo abasuka kumazwe anobungozi kakhulu bamkelekile kodwa kufuneka bangene (embindini) bodwa kwisithuba seentsuku ezintlanu bengenile. Abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo abasuka kumazwe anobungozi abanyanzelekanga ukuba babambelele kumanyathelo athile kwaye akukho mfuneko yokuba bangene bodwa.
Abahlali abangagonywanga, amalungu osapho, abasebenzi okanye abantu abanamakhaya eStatia kwaye bekwilizwe elinomngcipheko omkhulu okanye ilizwe elinomngcipheko omkhulu ngaphambili bamkelekile kodwa kodwa kufuneka bangene bodwa ixesha leentsuku ezili-10 emva kokungena. Abakhenkethi abangagonywanga abanakho ukundwendwela iStatia.
Ukuqhubeka nokuvula kuthetha ukuba kukho umngcipheko ophezulu ochaphazelekayo njengoko iindwendwe ezininzi ezivela (kakhulu) kumazwe anobungozi zinokungena eStatia kwaye zinokuzisa intsholongwane kwesi siqithi.
Ukongeza, umahluko we-Delta we-COVID-19 unyusa inqanaba lomngcipheko njengoko lo mahluko usasazeka ngakumbi. Nangona kunjalo, ngenxa yempembelelo enkulu ye-COVID-19 kuqoqosho lwaseStatia, kunye nenyaniso yokuba iipakeji zenkxaso kwezentlalo zikarhulumente waseDatshi azisayi kuphinda zibonelelwe, uRhulumente wengingqi akanandlela yimbi ngaphandle kokuqhubeka nokuvula isiqithi.